“पशुपतिनाथले सबैको इच्छा आकांक्षा पुरा गरुन ! यो साता तपाईको भाग्य कस्तो छ ? हेर्नुहोस साप्ताहिक राशीफल वैशाख १४ गते देखि २० गतेसम्मको – Etajakhabar
साप्ताहिक राशी – “पशुपतिनाथले सबैको इच्छा आकांक्षा पुरा गरुन ! यो साता तपाईको भाग्य कस्तो छ ? हेर्नुहोस साप्ताहिक राशीफल वैशाख १४ गते देखि २० गतेसम्मको
मेषः–मंगलबार सम्म समय अनुकुल देखिन्छ । सामाजिक काममा अभिरुची बढ्नेछ । गएका ठाँउमा स्वागत सत्कार मिल्नेछ । अपुरा,अधुरा विगतमा गर्न नसकेका अधिकाँश काम फस्र्योट हुनेछन् । मनबाट गलत विचार हटेर जानेछ । शारीरिक एवं मानसिक रुपमा काम गर्न सक्षम हुनुहुनेछ । व्यापार व्यवसायबाट आम्दानी बढ्नेछ । नोकरी तथा राजनीतिमा अवसरको खोजी हुनेछ । इच्छाशक्ति बढ्नेछ । शेष साता भने त्यति अनुकुल देखिन्न । व्यर्थकका काममा समय खर्च हुनेछ । मिथ्या कुराले सताउनेछ । व्यापार व्यवसायमा गरेको लगानी डुब्न सक्छ । विश्वास गरेकाले धोका दिने छन् । सुल्टो वोल्दा उल्टो अर्थ लगानउने छन् ।
वृषः– शनिबार र आईतबार काममा सोचे जस्तो प्रगति हुने छैन । यात्राको योग देखिन्छ । अरुको उपकारमा आफ्नो भविष्य नदेख्नु होला । मानसिक तनावमा कमि आउनेछ । सोमबार देखि शुक्रबार अपरान्ह सम्म समय अनुकुल हुनेछ । अवरुद्ध योजना अगाडि बढ्ने छन् । सामाजिक उत्तरदायित्व बढ्नेछ । उच्च व्यक्तित्वसँग भेट घाट हुनेछ । प्रेरणदायक शिक्षा मिल्नेछ । इज्जत प्रतिष्ठा बढ्नेछ । व्यापार व्यवसायमा नयाँ नयाँ सम्भावना देखिने छन् । हेलचक्र¥याई नगरि काम गर्नु होला हरेक क्षेत्रबाट लाभान्वित हुनुहुनेछ । वैदेशिक,श्रृङ्गारिक तथा लक्जरियस वस्तु व्यापारबाट लाभान्वित हुनुहुनेछ । नोकरी तथा राजनीतिबाट भने त्यति सन्तुष्टि मिल्ने छैन ।
मिथुनः– प्रारम्भ त्यति अनुकुल देखिन्न । शारीरिक तथा मानसिक रुपमा कमजोर भईनेछ । व्यपार व्यवसायमा अवनति हुनेछ । अलमल बढि हुनेछ । दैनिक काममा अवरोध आउनेछ । सोमबार देखि भने समयमा क्रमश सुधार आउनेछ । यात्राको सम्भावना पनि देखिन्छ । बुधबार देखि समयले पूर्ण साथ दिनेछ । अबरुद्ध काम अगाडि बढ्ने छन् । नयाँ कार्यरम्भ हुनेछ । सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्नु पर्नेछ । इज्जत प्रतिष्ठा बढ्नेछ । घर परिवारमा सुख शान्ति मिल्नेछ । व्यापार व्यवसायबाट प्रशस्त धन आउनेछ । घरमा मांगलिक काम हुनेछन् । ऋण लगानी गर्दा सोच विचार गर्नु होला । व्ययभार घट्नेछ । समयको सदुपयोग गर्नु होला ।
कर्कटः– शनिबार र रविबार प्रयत्न गरेमा केहि नयाँ काम हुनेछन् । पारिवारिक सुख मिल्नेछ । आयत निर्यात व्यापार व्यवसायबाट आम्दानी बढ्नेछ । सोमबार र मंगलबार प्रतिकुल देखिन्छ । स्वास्थ्यमा समस्या आउनेछ । काम काजमा अवरोध आउनेछ । जोखिम मोलेर काम नगर्नु होला । सुरक्षित यात्रा अप्नाउनु होला । काममा विवाद उत्पन्न हुनेछ । लगानी डुब्न सक्छ । आस्था र विश्वासमा चोट पुग्न सक्छ । बुधबार देखि समयमा क्रमिक सुधार आउनेछ । धार्मिक काममा सहभागि हुनुपर्नेछ । रोकिएका काम अगाडि बढ्नेछ । थोरै मेहनत गर्दा नयाँ काम हात पर्नेछ । पढाई लेखाईमा सुधार आउनेछ । कल्पनाले सकार रुप लिनेछ ।
सिंहः–मिश्रित फल मिल्नेछ । मंगलबारसम्म समयले थोरै साथ दिनेछ तर हेलचक्र्याई गरेर काम नगर्नु होला आएको अवसर पनि गुम्नेछ । काम सम्पन्न गर्न धेरै संघर्ष गर्नु पर्नेछ । सहयोगी मन खुम्चिने छन् भने दुष्टहरु अगाडि आउने छन् । आयत निर्यात व्यापार व्यवसायबाट सामान्य आम्दानी हुनेछ । आत्मियजनबाट सहयोग मिल्नेछ । यान्त्रिक कामबाट बढि लाभ हुनेछ । बुधबार देखि समय प्रतिकुल हुनेछ । स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ । आर्थिक पक्ष दूर्वल हुनेछ । फजुल खर्च बढ्नेछ । दैनिक काम काजमा समस्या आउनेछ । व्यापारमा अवनति हुनेछ । पढाई लेखाईमा मन जाने छैन । साथी भाई इष्टमित्रबाट धोका हुनेछ ।
कन्याः– प्रारम्भ अलमलमा जाने देखिन्छ । आफ्नै कारण अवसरहरु फुत्किने छन् । दुविधामा नपरि सोच विचार काम गर्नु होला । काममा धेरै उतार चढाव आउनेछन् र उतार चढावका विच काम हुनेछन् धैर्यता नटुटाउनु होला । हृदय देखि नै सहयोग गर्ने कोहि हुने छैन । संघर्षबाट मात्र लक्ष्यमा पुग्न सकिनेछ । अरुको भर विश्वासमा मात्रै काम नगर्नु होला धोका हुनेछ । आहर विहारमा ध्यान जान नसके स्वस्थ्यमा समस्या आउनेछ । प्रयत्न गरेमा नयाँ काम हात पार्न सकिनेछ । मुद्धा मामिलामा विजय हात लाग्नेछ । नोकरी तथा राजनीतिमा सोचे जस्तो सफलता मिल्ने छैन । आयत निर्यात व्यापार व्यवसायबाट आम्दानी बढ्नेछ । दामपत्य जीवनमा सुखानुभूति हुनेछ ।
तुलाः– शनिबार र आईतबार पारिवारिक समस्या सँग खेल्नु पर्नेछ । लगानीको सुनिश्चितता हुने छैन । शरीरिक शिथिलता बढ्नेछ । काम प्रतिको लगाव घट्नेछ । काममा चुनौतिहरु थपिने छन् । के गर्ने के नगर्ने भन्नेमा बढि समय व्यतित हुनेछ । शेष दिन मध्यम देखिन्छ । लगनशिलता बढाउनु होला । सवैलाई आफ्नो कुरा नखोल्नु होला । सहयोगी कम भेटिने छन् । बुधबार र विहिबार विरोधीको सामना गर्नु पर्नेछ । साना साना काम सफल गर्न पनि परिश्रम धेरै गर्नु पर्नेछ । कार्य गोपनियता अप्नाएर काम गर्नु होला । पढाई लेखाईमा प्रगति हुनेछ । प्रतिश्पर्धामा अगाडि हुनुहुनेछ । शुक्रबार प्रयत्न गरेमा नयाँ काम हात पार्न सकिनेछ ।
वृश्चिकः–शनिबार र आईतबार कार्य क्षमतामा वृद्धि हुनेछ । आफ्नै बाहुबलबाट धेरै काम सम्पादन हुनेछन् । सोमबार र मंगलबार पारिवारिक खर्चमा वृद्धि हुनेछ । शारीरिक शिथिलता बढ्नेछ । सुख,शान्तिमा कमि आउनेछ । घरमा वसाँई कम हुनेछ । व्यापार व्यवसायमा अवनति हुनेछ । आलोचना बढ्नेछ । बुधबारबाट समयमा क्रमिक सुधार आउनेछ । हेलचक्र्याई नगरि दुविधामा नपरि संयमित भएर कार्य गोपनियता अप्नाई काम गर्न सके केहि उपलब्धिपूर्ण हात लाग्नेछ । दीर्घकालिन असर पुग्ने खालका काममा हात नहाल्नु होला । नोकरी तथा राजनीतिमा थोरै सफलता मिल्नेछ । व्यापार व्यवसायबाट आम्दानी बढ्नेछ । उच्च व्यक्तित्वसँग भेटघाट हुनेछ ।
धनुः– शनिबार र आईतबार ऋण लगानी गर्दा विचार पु¥याउनु होला । अरुको कुरालाई पत्याएर काम नगर्नु होला डुविन सक्छ । सोमबार र मंगलबार साताकै उत्कृष्ट दिन रहेका छन् । काम गर्ने जोश जागर बढ्नेछ । व्यापार व्यवसायमा उन्नति प्रगति हुनेछ । लगनशिल भई गरेका काम सफल हुनेछन् । प्रयत्न गरेमा नयाँ काम हात पार्न सकिनेछ । शेष दिन भने त्यति सन्तोषजनक देखिन्न । कार्य क्षमतामा ह्रास आउनेछ । विभिन्न खालका समस्या आउने छन् । पढाई लेखाईमा पनि सोचे जस्तो सफलता मिल्ने छैन । विश्वास गरेकाले धोका दिने छन् । पारिवारिक खर्चमा वृद्धि हुनेछ । व्यर्थको घुमाई फिराई हुनेछ । आलोचना सहनु पर्ला ।
मकरः– समग्रमा साता राम्रै देखिन्छ । विगतको गल्ति सच्याउने अवसर मिल्नेछ । अनावस्यक खर्चमा कमी आउनेछ । आर्थिक कारोवारमा सन्तुलन आउनेछ । भोज भतेर सभा सम्मेलनमा भाग लिनको लागि निमन्त्रण आउनेछ । अबरुद्ध काम अगाडि बढ्ने छन् । काम गर्ने जोश जागर बढ्नेछ । जीवन साथिको सहयोगमा महत्वपूर्ण काम हुनेछन् । व्यापार व्यवसायबाट अम्दानी बढ्नेछ । नयाँ कामको प्रस्ताव आउन सक्छ । पढाई लेखाईमा भने सोचे जस्तो प्रगति हुने छैन । भूमि,औषधी चिकित्सा जस्ता व्यापार व्यवसायबाट आय आर्जन बढ्नेछ । कला,साहित्य संगित तिर अभरुची बढ्नेछ । वैदेशिक क्षेत्रबाट लाभान्वित हुनुहुनेछ ।
कुम्भः– शनिबार र आईतबार त्यति अनुकुल देखिन्न । अनावस्यक खर्चमा वृद्धि हुनेछ । व्यर्थको घुमाई फिराई हुनेछ । सोमबार र मंगलबार उत्कृष्ट देखिन्छ । समयको सदुपयोग गरेर काम गर्नु होला । विगतमा गर्न नसकेका काम हुनेछन् । काम गरेर नाम राख्न सकिनेछ । भोज भतेर सभा समारोहमा सहभागि हुने अवसर मिल्नेछ । कार्य क्षमता बढ्नेछ । अध्ययन अध्यापन कार्य अगाडि बढ्नेछ । साथि भाई इष्टमित्रबाट सहयोग मिल्नेछ । व्यापारबाट सोचे भन्दा राम्रो आम्दनी हुनेछ । उच्च व्यक्तित्व सँगको भेटले उर्जा मिल्नेछ । सामाजिक इज्जत प्रतिष्ठा बढ्नेछ । शेष दिन मध्यम देखिन्छ । लगनशिलता बढाउनु होला,जोखिम नमोल्नु होला ।
मिनः– शनिबार र आइतबार आय आर्जन बढ्नेछ । प्रयत्न गरेमा पुरानो रकम उठ्नेछ । व्यापार बढ्नेछ । सोमबार र मंगलबार प्रतिकुल देखिन्छ । कुनै काम गर्दा जोखिम नउठाउनु होला । राज्य सँग सम्बन्धित काममा बढि सतर्कता अप्नाउनु होला । खर्च ज्यादा हुनेछ । सुरक्षित यात्रा गर्नु होला । नयाँ क्षेत्रमा लगानी नबढाउनु होला । अरुको भरमा काम नगर्नु होला । शेष दिन भने सामान्य अनुकुल देखिन्छ । प्रयत्न गर्दा सफलता मिल्नेछ । निर्णय क्षमता बढ्नेछ । वैदेशिक कार्य अगाडि बढ्ने छन् । भोज भतेर सभा समारोहमा सहभागि हुने अवसर प्राप्त हुनेछ । पारिवारिक सुख शान्तिमा वृद्धि हुनेछ । व्यापारमा सुधार आउनेछ ।
Published on: Saturday, April 27, 2019 Time: 9:28:48
-19994 second ago
-19186 second ago
-19000 second ago
-18500 second ago
-17920 second ago
-17122 second ago
-16187 second ago
प्रधानमन्त्रीको गुनासो: खाली बासुंरी बजाएको मात्र देख्छन् काम गरेको देख्दैनन् (भिडियो)
-15406 second ago